I-Semalt Expert: Yintoni iWebhu Page Ukuqhawula?
kumaphepha kwiWebhu ye-Wide yeWorld, kwaye iquka ukugcina idatha ekhishwe kuyo yonke indawo kwiziko elilodwa lokufumana ukukhangela, ukuhlunga kunye nokuhlunga. Ungasebenzisa iinkonzo zekhasi lewebhu ukutshiza yonke idatha oyifunayo kuwo onke amaphepha ewebhu ewebhu. Le nkonzo ibandakanya nokugcina idatha kwi-database, spreadsheet, okanye nayiphi na ifomathi.
Naluphi na injongo yakho, le nkonzo yokucoca idatha ingayiphatha. Ngaba ufuna ukubeka iliso kwixabiso lamashishini? Ngaba ufuna ukuthelekisa iinkqubo okanye ikopi yemveliso yolwazi? Inkonzo yokwahlula iphepha kwiWebhu yikho konke okufunekayo. Udinga kuphela ukucacisa indawo kunye nento efunekayo. Idatha ayiyi kukhishwa kuphela kuwe, iya kuguqulwa ibe yifom ekhethiweyo.
Ukukhutshwa kwamanani amancinci
Le nkonzo ingasetyenziselwa ukukrazula okanye ukucoca amanqaku amancinci axhomekeke kwimveliso ethile. Ngokomzekelo, kukho isamba esininzi, kwaye iingcaphuno zabo kunye namaxabiso ahlala eshintsha rhoqo. Ukuba unayo okanye unomdla kwisitokhi esincinci kwaye ufuna ukubeka iliso amaxabiso kunye neengcaphuno, ungadinga ukusebenzisa le nkonzo. Njengoko amanani atshintsha kwisayithi yomthombo, baya kuguqula indawo yakho. Oku kuya kukulondoloza intlungu yokusebenza ngokusebenzisa uluhlu olude lwentsimbi rhoqo.
Uninzi lwabantu ngokuqhelekileyo lubeka iliso kwixabiso leempahla ezivela kwiinkampani ezahlukeneyo..Umngeni ngolu hlobo kukuba bahlala behlola iiwebhusayithi eziliqela. Ukuthelekiswa kwamazinga kwiithebhu ezahlukileyo kunokuba nzima. Kufuneka bakchofoze kwisithuba emva kwethebhu. Kodwa oku kunokuba lula ngeenkonzo zokuqhafaza kwiwebhu. Baye banakho konke kwiphepha elihlaziywa rhoqo. Ukubeka iliso kwimivuzo yokuboleka imali kulula ukwenza kwiphepha elilodwa. I-Web scraping service izokukunceda uhlawule iirhafu kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo uze ulondoloze yonke idatha kunye kwelinye iphepha. Khumbula ukuba njengoko amaxabiso ahlaziywa kwiiwebhsayithi ezisemgangathweni ukwenzela ukuba iikopi yakho ihlaziywe kwakhona.
Ukukhupha amaxabiso kunye nemifanekiso yemveliso eyahlukeneyo kwiwebhusayithi yokuthenga
Ngokomzekelo, abantu bathenga ukutya rhoqo. Ungasebenzisa le nkonzo ukukhawuleza amaxabiso okutya kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo zokuthelekisa. Yaye uya kuhlala ufumana ulwazi olusesikhathini. Ngoko, nanini na xa ufuna ukuthenga ukutya, uza kujonga kuphela ifayile uze uthathe ingqalelo kwintengiso kunye neendlela ezifanelekileyo. Unokugqiba ukuthenga iklabishi kwi-Shop A, kunye ne-Green Peas kwi-Shop B, njl.
Ukukhutshwa kwezithombe ezivela kwi-stock photography, imibukiso, okanye kwiwebhsayithi
Ungasebenzisa le nkonzo ukukhangela imifanekiso evela kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ezizaliswe imifanekiso emininzi. Ezinye zezo ziza ziindawo zendawo yokuthatha izithombe, izingo zomtshato, kunye nemiboniso ukukhankanya ezimbalwa.
Ukuhlanganiswa kwisicelo esele sikwenza nzima
Idatha ekhishwe ngale nkonzo inokudibaniswa kalula nakwiyiphi na yezicelo zakho. Iinkcukacha zinokudibaniswa kwi-spreadsheet, inkqubo yoxwebhu, i-CSV, okanye ezinye izicelo ezenziwe ngokwezifiso. Ungasebenzisa le nkonzo ukukhahlela idatha kwiiwebhusayithi ezikhuselekileyo ezivimba abangengamalungu.
Nantoni na ukuyifuna inkonzo, qha ga mshelana nenkampani ngeendleko kunye nexesha eliqikelelwayo lokufika kwiphepha lakho lephepha lewebhu.